Chikamu mabasa evadzidzi - Zvinorevei uye zvinopesana nebasa revadzidzi
Chikamu mabasa kune vana nevechiri kuyaruka
Ndezvipi zvibatsiro basa rerutivi rine vana?
Kana vana vane chido chaicho chakasava nyore kuzadzika, ivo vanowanawo pfungwa yekubhadhara ivo pachavo. Kunyange vana vekuchikoro chesekondari vakashandira mukuru, vanosvina yadhi uye vanotarisira mberi kweEuro pamwe nekuwedzera mari yehomwe. Kune rumwe rutivi, hapana chokwadi chakaipa nacho uye kunyange vana vanotaura nezvekuchenesa imba yevana pamusha ne "Basa revana rinorambidzwa" kamwe kamwe vanoenda nokuzvidira kuburikidza netariro yehomwe mari.
Vana vanogona rini kubvuma basa rekushanda kwekanguva?
Mubvunzo hausi chete, iwe unogona kuitei, asi zvakare, iwe unobvumirwa kuitei? Zvechokwadi, inogara iri pamusoro pezvinhu zviduku zvinenge zvakakodzera nguva uye hazvitungamiri kune chero basa rinotyisa.
Ndezvipi-nguva yenguva mabasa inobatsira vana?
Zvisinei, sezvo vana vachikura, vanodawo kutora basa rakakodzera revadzidzi uye ipapo mubvunzo wezvakabvumirwa ndezvechokwadi kusvika panguva ino.
Kana vana vasati vasvika 13 yemakore, havabvumirwi kushanda nokuti "Youth Protection Act" inoronga izvozvo
13 kana 14 vane makore vashanu vanogona kuwana chimwe chinhu nemvumo yevabereki vavo, kunze kwekuti iri basa rakaoma risina kukanganisa chikoro chekuita
Kusiyana neizvi, 15-18 vechidiki vanobvumirwa kushanda kusvikira maawa 8 pazuva, asi hapana zvinhu zvinorema, zvine ngozi kana zvinonetsa mumhepo kana kupisa
Izvo zvinowanikwa nevana mushure memakore 13, hazvifaniri kubhadhara mutero, chero bedzi mari yainowana haina kudarika chikamu che 450 Euro pamwedzi. Zvisinei, vabereki vanofanira kuve nechokwadi chokuti "mushandirwi kana mutengi" anonyatsodzichengetedza nehomwe yemari yveshuwarisi.
Kwete vasikana bedzi asiwo vakomana vanobatsira zvikuru panguva ino. Vanoda kubatsira vanhu vakwegura kuti vatenge kana kutengesa kufamba navo. Uyewo kutarisira vana vaduku kana kuita mapepanhau inowanzoitwa basa revechiri kuyaruka. Pakati pe13 nemakore 15 vanobvumirwa kuita izvi kwemaawa maviri pazuva, asi kusvikira manheru 18 clock.
Kana vana nevechiri kuyaruka vanoita nhare dzavo dzokutanga nenyika yebasa, izvo zvinogona kuva nemigumisiro yakanaka.
Kunze kwehomwe mari yehomwe yavanowana, vanogonawo kuona kuti chii chakaita kuva nekuzvipira kune mumwe nemumwe. Uye kana pane mari yeiyo, inodzidzawo kuti ingashanda sei. Izvi zvinogona kunge zvakakosha pakugadzirisa kwemari gare gare.
Uyewo, mutoro wavanotora mubasa unogona kudzidzisa. Vana vakwegura kana vechidiki vanogona kuziva kuti ndezvipi zvido zvehupfumi zvavanowana kuburikidza nebasa rakadaro kana nguva yechando. Vana vanodzidza kushanda vanodzidza kuti kukoshesa nguva yakasununguka chii.
Zvikonzero zvinopesana nebasa
Zvechokwadi zvinogonawo kunge zvisina kukanganisa kana vana vachitsvaka basa remukati. Vabereki vanofanira kunyatsopindira kana vana vasingateereri chikoro kana mhuri kuburikidza nebasa rekushanda. Kana vakangowanikwa chete pavanoshandira, izvi zvinogonawo kuva chiratidzo chekusaziva kumba.
Chero zvazvingava, vabereki vanofanira kumira basa kana mwana wacho apera simba uye achingozvimberedza zvakaneta kana kuratidza kuchinja kwepfungwa. Kuita mari kunonakidzawo kune vadzidzi, asi kwete apo mari inotungamirira kuchinja chekuita kwevatengi.
Zvokudya zvakakodzera zvevana nevechiri kuyaruka
Sweets yevana | chikafu
Loft beds for children | Imba neimba